Izinto ze-10 Okumele Uzazi Ngo-R, Python, ne-Hadoop | IYO
Izizathu ze-10 Okufuneka Ufunde R, Python, neHadoop
I-Domain Analytics Domain iyaqhubeka idlula kwizilwanyana kwi-Software njengeNkonzo, okanye ii-SaaS, njengoko siyazi kakuhle. Wonke umntu kufuneka aphule Idatha enkulu kwaye banetoni yokuvulela umsebenzi kwi-ascension. Nangona kunjalo, ukuqhubela phambili kwiSayensi zeDatha kuyisisiseko sokuqonda ukuba yiyiphi na kwaye yiyiphi iSatifikethi seSayensi seSatifikethi sokuhlala. Le yindawo R, Python noHadoop kungena kwaye zizinto ezilishumi ezikhuthazayo zokubazi. Ezi ziyiziqulatho zeziprogram ezifanele zifundwe ukuba ziphule kwi-nkcukacha yezobugcisa zenzululwazi, ezibandakanya amagama abetha njengeGoogle, iBan of America kunye neNew York Times.
Ukufikeleleka:Unjani omnye umxhasi ekulindeleke ukuba afunde? R, umzekelo, avunyelwe ukuba angenise kwaye asebenze kwaye oko kunika umxhasi igunya lokuhlala kwaye ufumane malunga nayo nayiphi na indawo. Python, kwakhona, akufuneki ukufundwa kwaye abanye bathi yinto ecacileyo kakhulu yokubhala iilwimi. Hadoop, kwakhona, kufumaneka kwiinkqubo ezivulekileyo zendalo, okwenza kube lula ukufikelela. Ukuxhomekeke kwindawo yokuhlala yakho, umthengi unokusebenzisa nayiphi na. Elula
Uphuhliso: Ngokubhekiselele ekubhalisweni kolwazi, ezi ntetho ezintathu ezivulekileyo zeprogram zivulekile. Ukumelwa kokungenisa ulwazi, i-MapReduce kunye ne-Processing efanayo kuya kufezwa ngokugqibeleleyo kunye nabo, njengokuba umphumo wokubandakanya amanyathelo okuphanda kufuneka ahlaziywe ngokuqhubekayo, kwakhona afunwa ngaphantsi.
Platform: Iindidi zezicwangciso zingasetyenziselwa zonke izigaba, ezifana neWindows, i-Mac OS X, i-Linux kunye neyona mibini ngaphezulu, evumela ukuba abathengi bazalise umsebenzi wabo kunoma iyiphi igajethi. Abaqulunqi be-R kunye nePython njengamanje bacinga ngeendlela zokulawula ubuninzi beenkcukacha eziphambili kwiinqanaba ezikhudlwana, kwaye bathabathe iphosi kwiSQL kunye ne-NoSQL yolwazi.
Ukungaqiniseki okwenziwa lula: Ezi zintathu zokubhala iinkqubo zisetyenziselwa ukunyamekela ulwazi olunzulu nolunzima, olubizwa ngokuba yiDig Data. Ukuphindaphinda kunzima kwaye kunzima kunokwenzeka ukuba kunokwenzeka ngokulula ngokusetyenziswa kwezi ntetho, kumaqela aphakamileyo okanye ngabaprojekthi abaninzi. I-Python ibhubhisa ulwazi olugqwesileyo kunanto nayiphi na R kodwa ke zombini ixubusha kakuhle Hadoop, ukunika abathengi ukhetho ngokuxhomekeke kumacandelo ahlukeneyo ukukhetha ukuba ngubani oza kusebenza naye.
Ukwamkeleka Okumangalisayo: Ngelo nani elininzi leenzuzo, abadibeneyo baye bandisa kwi-recognition yebhodi kunye nabaxhasi be-2 abaxhasi basebenzisa umhlaba ngelixa bephethe ulwazi lwezesayensi. Ukususela ngoku i-R iye yanda kwi-board yexabiso, i-Oracle, i-SAP, i-Netezza kunye ne-Teredata sele iqalile ukudala ii-interfaces ezisebenzisa i-R njengenkxaso yesayensi.
Ukuphuculwa okulinganayo: Naluphina uphuculo olutsha lweenkqubo zokuhlaziywa ngokutsha ngokuqinisekileyo luyenzeka ngokukodwa kwezi zintetho ezi zintathu kuba zizona zize ziphuhliswe kwaye zilungelelanise. Ngeentuthuko ezintsha ezinjenge-ff kunye ne-bigmemory, ngoku kukhangeleka ukulawula iifasethi ezinkulu kuneememori. I-Python ichitha ulwazi ngokubanzi ngokuchanekileyo nangokuvumelanisa kunye Hadoop ngumvuzo okhethekileyo.
Ukulula koPapasho: Ekubeni iilwimi ezidibeneyo zibandakanya kakuhle kunye nerekhodi yokusabalalisa, ziyi-pick top top pick. Ukubambelela ngokukodwa kunye ne-LaTeX iirekhodi zokusabalalisa kunye necandelo lokufakwa kwiingxelo zokuphatha amagama likhulu kakhulu ngaphezu kwendawo. Wonke umntu ochazayo unesistim ebonakalayo sezinto eziphilayo, okwenza kube lula ukusabalalisa nokusingatha imiqulu eninzi yolwazi.
Kulula ukuyisebenzisa: I-H, i-Hadoop ne-Python kulula ukuyiqonda kwaye igxininise ukungenisa ulwazi oluvela kwi-Microsoft Excel, Access, i-MySQL, i-SQLite kunye ne-Oracle, evumela nawuphi na umthengi nganoma yimuphi umveliso ukusebenza ngaphandle komqobo. Python sele isetyenziswe ngempumelelo kwiCandelo loCwangciso loLwimi kunye neApache Spark lenze ulwazi lufumaneke Hadoop iimbumba zivuleke ngakumbi.
Ukuhlela: Ukuqhagamshelana koluntu kunye neenkqubo zolawulo yingxenye ebalulekileyo yobudlelwane bomhlaba jikelele kunye nabaxhasi abanomdla baqhubeka bexhamla phezu kwezakhiwo ukuthetha ngezi ntetho ngaphezu kwanoma yini enye, ukuqinisekisa ukuba uguquko oluqhubekayo lweedatha ezilungileyo. U-Anaconda osanda kutshatyalaliswa unalo ngaphezu kwe-300 okanye amaninzi amaninzi aqokelele uphando olusuka kubaxhasi emhlabeni kwiingxoxo zabo, bebaqhambela kwiimpahla ezizayo.
Ukuguqulwa okulula: Ukukhangela kunye nokuphanda akufuneki kakhulu ngalezi zihlomelo kunezinye ngenxa yendlela ezininzi iinkqubo zokuxinwa kweengxaki zenziwe ngokuhambelana nalezi zidibanisi, ukuvumela abathengi ukuba babeke izinto ezifanelekileyo kunye nolwazi oluphawulekayo. Iilwimi nganye ineentlobo ezithile kunye neengxaki kodwa omnye unokuthi R, IPython neHadoop amalungiselelo kunye nokulindeleke ukuba kusetyenziswe ukugcina izikhokelo zakho zikhuselekileyo kunye neyona ndlela efanelekileyo kwimeko apho kufuneka uhambe uhlaziyo olupheleleyo.
Indlela Yokuqalisa Umsebenzi nge-Big Data & Hadoop Certification Training